हाम्राे पिपलबाेट » जेलबाटै पठाए रेशम चौधरीले बाबुरामलाई चिठी, के लेखिएकाे छ त चिठिमा ? जेलबाटै पठाए रेशम चौधरीले बाबुरामलाई चिठी, के लेखिएकाे छ त चिठिमा ? – हाम्राे पिपलबाेट
जेलबाटै पठाए रेशम चौधरीले बाबुरामलाई चिठी, के लेखिएकाे छ त चिठिमा ?
टीकापुर हत्याकाण्डका आरोपी रेशम चौधरीले कारागारबाट पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई एक पत्र पठाएका छन् । डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा रहेका चौधरीले लेखक दिलनिशानी मगरमार्फत भट्टराईलाई पत्र पठाएका हुन् ।
जेठ १७ गते लेखिएको पत्रमा एउटै वर्ग र समूदाय आन्दोलनमा सहभागि भएकै आधारमा षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले घटनालाई गैरराजनीतिक बनाइएको उनले गुनासो गरेका छन् । तीन वर्षदेखि अदालतले कुनै फैसला नगरी पुर्पक्षका लागि २६ जनालाई थुनिराखेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘टीकपुर घटना राजनैतिक हुन सकेन, बनाइएन । हुन नसक्नु र बनाइनुको पछाडि एउटै कारण हो–एउटै वर्ग र समूदाय मात्रै आन्दोलनमा सहभागि हुनु !’
उनले आफूहरुले शान्तिर समृद्धि चाहेपनि न्याय नपाएका आक्रोशित जनताको बीचमा मुलुकले कसरी समृद्धिको फड्को मार्न नसक्ने समेत दाबी गरेका छन् । उनले आफूलाई भट्टराईसँग भेट गर्ने इच्छा रहेकाले कारागारमा बाबुराम भेट्न आउने बाटो हेरिरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच दिलनिशानी मगरले आइतबार भट्टराईलाई भेटेर पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । पत्र बुझ्दै भट्टराईले आफू समय मिलाएर चौधरीलाई भेट्न जाने प्रतिबद्धता जनाएको लेखक मगरले बताए ।